News 18 Nepal || प्रेम के हो र कसैलाई प्रेम गर्नुको कारण के हो ?
आजको समय ‘प्रेम’ शब्दको यति दुरूपयोग भएको छ कि हरेक चरणमा यसको अर्थको बारे प्रश्नहरू उठ्दछन् । यदि यो सच्चा प्रेम हो भने, यो कसरी यस्तो हुन सक्छ ? केवल ज्ञानी व्यक्ती नै प्रेमको जीवित मूर्ति हो, हामीलाई उसले नै प्रेमको वास्तविक परिभाषा बताउन सक्छ ।
साँचो प्रेम त्यो हो जुन कहिल्यै बढ्दैन र घट्दैन । आदर गर्नेलाई त्यहाँ कुनै रिस छैन, न त अपमान गर्ने प्रति कुनै घृणा नै छ । संसारमा कुनै साँचो प्रेम छैन । साँचो प्रेम एक व्यक्तिमा मात्र पाउन सकिन्छ जसले आफ्नो आत्मालाई पूर्ण रूपमा चिन्दछ ।
प्रेम भावना, व्यवहार, स्नेह, सुरक्षा, न्यानोपन र अर्को व्यक्तिको सम्मानको भावनाहरुसँग सम्बन्धित विश्वासको एक जटिल सेट हो । प्रेम पशु, सिद्धान्त र धार्मिक विश्वासमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि, एक व्यक्तिले भन्न सक्छ कि उसले आफ्नो कुकुरलाई प्रेम गर्दछ । त्यहाँ प्रेमका विभिन्न रूपहरू छन् र यो कुनै सीमानाहरूमा सीमित छैन ।
हामी किन मायामा पर्दछौं ?
किन प्रेम गरिन्छ वा किन प्रेम हुन्छ वास्तवमा, त्यहाँ प्रेमको एक कारण हुन सक्छ वा हुन सक्दैन । कुन व्यक्ति कोसँग कहिले प्रेम गर्छ भन्ने कुरा केही भन्न सकिदैन । यो केवल एक भावना हो र जब व्यक्ति बुझ्छ, यो हुन्छ ।
प्रेम शारीरिक सम्बन्धको लागि हो ?
शारीरिक सम्बन्ध शरीरको एक प्राकृतिक आवश्यकता हो र हरेक मानवले भोक र तिर्खा जस्ता यौनको अनुभव गर्दछ । यद्यपि प्रेम सेक्सको लागि आवश्यक छैन, तर यौनलाई प्रेमको अंशको रूपमा लिइन्छ । यसैले उनीहरूको चाहिएको साथीलाई प्रेम गर्दछन् ताकि उनीहरू एक अर्काको शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकून् । वास्तवमा राम्रो सेक्सनले तनाव मात्र कम गर्दैन, यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ । यसले दुई व्यक्ति बीचको घनिष्ठतालाई पनि बढाउँदछ किन कि मानिसहरू प्रेममा पर्दछन् ।
प्रेम खुशी हुनु हो ?
प्रेम भनेको के हो ? जब एक व्यक्तिले हामीलाई खुशी बनाउँछ र हाम्रो ख्याल राख्दछ । वास्तवमा, प्रत्येक व्यक्ति प्रेमको लागि भोकाउँछन् र उसले आफैंलाई आफ्नो प्रेमी देख्छ र आफैलाई माया गर्छ । यो आवश्यक छैन कि यो प्रेम केवल प्रेमी र प्रेमिका बीच हो । वास्तवमा प्रेम धेरै रूपमा हुन सक्छ जो एक व्यक्तिको लागी साहस, आत्मविश्वास र ऊर्जा दिन्छ । केही व्यक्ति प्रेमलाई बलको रूपमा प्रयोग गर्छन् र कठिनाइहरूबाट अगाडि बढ्छन् । भन्न खोजेको कुरा के हो भने, ‘जुन व्यक्तिले हामीबाट प्रेम पाउँछ, उसले प्रेम गर्नु स्वाभाविक हो ।’
प्रेम आपसी सद्भावका कारण हो ?
यदि दुई व्यक्ति बीचमा राम्रो समझदारी छ भने प्रेममा हुनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा, जब सम्बन्धमा पर्याप्त समझदारी छैन, तब सम्बन्ध बिग्रन्छ र जीवन बोझ महसुस लाग्छ । जब एक व्यक्तिले उसलाई राम्रोसँग बुझ्ने एक व्यक्ति फेला पार्दछ, त्यो उसको प्रेमको कारण हुन्छ ।
प्रेम समानताहरूको कारणले हो ?
जब दुई व्यक्तिमा उस्तै विचार र चासो हुन्छ र त्यहाँ व्यक्तित्व, विश्वास र सोच्ने तरिकाहरुमा समानता हुन्छ, तब तिनीहरू एक अर्काको प्रेममा पर्दछन् । एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि दुई विपरीत लिगका व्यक्तिहरू एक अर्काको समान रुचि र विचारहरू जान्दछन् र उनीहरू प्रेममा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यस बाहेक, यदि एक व्यक्तिले आफू जस्तो साथी फेला पार्छ, तब ऊ उससँगै प्रेममा पर्दछ ।
प्रेम कसरी हुन्छ ?
जब हाम्रो जीवनमा एक व्यक्तिले खालीपन भर्छ र सधैं आवश्यक परेको बेला हामीलाई सहयोग गर्दछ, त्यसपछि हामी प्रेममा पर्दछौं । यो प्रेम भेट्टाउने, सम्भोगको आवश्यकता पूरा गर्ने, साथीहरू आदिको कारणले हुन्छ । हामीलाई जीवनमा त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले हामीलाई कठिनाइहरूसँग लड्न, निर्णय लिन मद्दत गर्ने र हामीलाई चाहिएको खण्डमा सहयोग गर्ने साहस दिन्छ । यदि तपाई त्यस्ता व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा तपाई उनीसँग माया गर्नुहुन्छ ।
साँचो प्रेम भनेको के हो ?
आजका दिनहरुमा कसैको प्रेममा पर्नु र छुट्नु सजिलो विषय बनेको छ । मुटुको ब्रेक पछि चाँडै एक नयाँ व्यक्ति फेला पर्दछ र यो प्रक्रिया जारी रहन्छ । यसको बाबजुद पनि हामी त्यस्तो व्यक्ति भेट्छौं जसले हाम्रो मुटु जित्छ र हामी अन्धाधुन्ध भरोसा गर्न सक्छौं र यसलाई साँचो प्रेम भनिन्छ । वास्तवमा आजको समयमा विश्वासी व्यक्तिलाई भेट्टाउन धेरै गाह्रो छ । प्रेम पनि भरोसामा निर्भर गर्दछ । तसर्थ, जब कुनै त्यस्तो मूल्यवान् व्यक्ति हाम्रो जीवनमा आउँछ, तब हामीले जान दिनुहुन्न ।
विशेष गरि कसैलाई प्रेम गर्नुको कारण के हो ?
यो आवश्यक छैन कि हामी कसैलाई भावनाको आधारमा मात्र प्रेम गर्छौं । प्रेम कुनै पनि समय र कुनै पनि चीजको आकर्षणबाट हुन सक्छ । वास्तवमा जब हामी एक व्यक्तिको व्यक्तित्व, बसेको र कुरा गर्ने तरिका, लुगा लगाउने भाव र अनुहार मन पराउँदछौं तब प्रेम हुने कुरा निश्चित छ । प्रेममा हुनुको कुनै कारण वा आधार छैन । जब तपाईंलाई केहि मन पर्दछ र तपाइँ आकर्षण गर्न थाल्नुहुन्छ तब यो प्रेम हो ।
हर्मोनका कारण प्रेम हुन्छ ?
जब कसैले तपाइँको मुटुको ढोका ढक ढकाउँछ, तपाइँको मुटुमा घन्टी बन्छ । वास्तवमा तपाईको दिमागमा डोपामाइन र सेरोटोनिन भन्ने रसायनको स्तर राम्रो हुन्छ, तब तपाईको शरीरमा प्रेम हार्मोन ऑक्सीटोसिनको मात्रा बढ्छ, तपाईलाई तनाव हुँदैन र विश्वको सबै थोकले तपाईलाई सुन्दर देखिने बनाउँदछ । बिना कारण प्रेम पनि यो हर्मोनको कारणले हो जुनमा तपाईले केहि पनि वास्ता नगरी माया गर्नुहुन्छ ।
प्रेमले तपाईको ख्याल राख्दछ, किनकि प्रेमले जान्दछ कि हामी सबै एक अर्कामा गाँसिएका छौं । प्रेम स्वाभाविक दयालु र समानुभूतिपूर्ण छ । यो प्रेमको वास्तविक प्रकृति हो र प्रेम आफैंलाई चलाउन वा प्रतिबन्ध गर्न सकिदैन । प्रेमले प्रत्येक आत्माको सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्दछ । यो प्रेमको कानून हो ।